Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Respiratory tract infections (1) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း (၁)
Respiratory tract infections (1) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း (၁)
29 Jun 11, 21:20
ဆရာခင်ဗျား အဆုတ်ပွခြင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဆုတ်အကြောင်း သိကောင်းစရာဆိုပြီး ရေးပေးပါလား။
ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ အလွယ်ခေါ်တဲ့ အဆုပ်ပွတယ်ဆိုတာကို ဆေးပညာနဲ့ ဘာလဲတန်းပြောဘို့ မရေရာဘူး။ (နူမိုးနီးယား) ကို ပြောချင်သူ များမယ်။ ဆေးပညာအရ ထွေးခဲသွားတာမှ နူမိုးနီးယား။ (သပ်သပ် ရေးထားပါတယ်။) အဆုပ်ပွတာနဲ့ တူတာတွေက Pleural effusion အဆုပ်ထဲ ရေဝင်တာနဲ့ Pneumothorax အဆုပ်ထဲလေများတာ။ ဒါ့ကြောင့် အသက်ရှူလမ်း ရောဂါတွေ တန်းစီပြီး ရေးပါမယ်။
နှာခေါင်းထိပ်ကစပြီး အဆုပ်ထဲက မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်အောင် သေးငယ်လှတဲ့ နေရာလေးအထိ ရှိတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကို လေ့လာဘို့ရာ Upper respiratory tract infection အထက်ပိုင်းနဲ့ Lower respiratory tract infection အောက်ပိုင်းလို့ ခွဲခြားထားတယ်။
Upper respiratory tract infections (URI or URTI) အသက်ရှူလမ်း အထက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်းကို Throat infections လည်ချောင်း ရောင်ခြင်း လို့လဲ သတ်မှတ်တယ်။
အသက်ရှူလမ်း-အထက်ပိုင်း ရောင်တာတွေ ဖြစ်ရင် နှာစေး၊ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုး၊ အသံနာ၊ အာခေါင်နာ၊ မျိုချရင်နာ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ကိုယ်ပူ စတာတွေ ခံစားရမယ်။ ဖြစ်ရင် တပါတ်-ဆယ်ရက်ကြာမယ်။ Group A beta hemolytic streptococcal ခေါ်တဲ့ ဗက်တီးရီးယား က တရားခံဖြစ်တာ များတယ်။
နားရောင်တာလဲ ဒီအုပ်စုထဲမှာ ပါသလို၊ Viral Conjunctivitis ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မျက်စိနာကလဲ ဆက်စပ်နေနိုင်သေးတယ်။ Seasonal allergies ရာသီဥတုကြောင့် အလာဂျီ ရတာ၊ Influenza တုပ်ကွေးတွေလဲ ဒီအုပ်စုထဲကဘဲ။
Treatment ကုသတဲ့အခါ (ဗိုင်းရပ်စ်) ဆိုရင် အထောက်အကူပေးတဲ့ ဆေးတွေသာ ရှိတယ်။ Antibiotics ပိုးသေဆေးတွေ၊ မလိုဘဲ မသုံးတာ ကောင်းတယ်။ ပဋိဇီဝဆေးကို စောင်ကြည့်ပြီးမှ ပေးတာဟာ ရောဂါအတွက်နဲ့ လူနာ စိတ်သက်သာ ကျေနပ်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ကြည့်ချိန်ဆရတယ်။
• Epiglottitis ဆိုတာလဲ သိပ်မကွာဘူး၊ Superior portion of the larynx and supraglottic area နေရာတွေပါ ရောင်နိုင်တယ်။ Severe difficulty breathing အသက်ရှူခက်မယ်။ Noisy breathing (Stridor) အသက်ရှူသံ ကျယ်မယ်။ hoarseness အသံသြနေမယ်၊ Drooling and difficulty swallowing မျိုချရတာ ခက်မယ်။ Epiglottitis ဖြစ်ရင် Urgent tracheal intubation အရေးပေါ် ပြွန်ထည့်ဘို့ လိုနိုင်တယ်။ ကလေးတွေဖြစ်တာ ပိုသတိထားရမယ်။ Antibiotics ပေးရမယ်။ Cephalosporins တမျိုးထဲဖြစ်ဖြစ် Penicillin ဒါမှမဟုတ် Ampicillin ကို တွဲပေးရမယ်။
• Laryngitis အသံအိုး ရောင်တာနဲ့ Laryngotracheitis ဆိုတဲ့ Larynx, Trachea, and Subglottic area နီးစပ်တာတွေပါ ရောင်တာတွေ ဖြစ်တယ်။ hoarse voice အသံသြနေမယ်၊ croup ကလေးဆိုရင် အဟွတ်-အဟွတ် နေမယ်၊ Steroids 20-40 mgs စတီရွိုက် ရှူနိုင်တယ်။ Steam ရေနွေးငွေ့ရှူတာ ကောင်းတယ်။ Laryngitis အသံအိုးရောင်တာက Gastroesophageal reflux အစာချေရည် အထက်ဆန်လို့ ဖြစ်ရတာဆိုရင် Ranitidine (Zantac) နဲ့ Omeprazole (Prilosec) ဆေးတွေကိုပါ ၄-၆ ပါတ်ကြာအောင် ပေးရမယ်။
• Nasopharyngitis (Rhinopharyngitis or Common cold) အအေးမိတာကို ခေါ်တာပါဘဲ။ Nares, Pharynx, Hypopharynx, Uvula, and Tonsils ဘေးနားတဝှိုက်က အရာတွေလဲ ရောင်နေနိုင်တယ်။
• Otitis media = Ear infections နား အလည်ပိုင်းရောင်တာ၊ Antibiotics နဲ့ Pain killers ပေးရမယ်။ ခွဲစိတ်ဘို့ လိုလာနိုင်တယ်။ Decongestants နဲ့ Antihistamines ဆေးတွေကိုလဲ နှာခေါင်းထည့်ဆေးဖြစ်ဖြစ် စားဆေးဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်တယ်။ Oral and topical analgesics နာတာသက်သာစေမဲ့ စားဆေး၊ လိမ်းဆေး၊ Ibuprofen, Paracetamol (Acetaminophen) နဲ့ Narcotics ပြင်းတဲ့ဆေး ပေးနိုင်တယ်။ Antipyrine နဲ့ Benzocaine ear drops တွေ ခပ်နိုင်တယ်။
Otitis Media နားအလည်ပိုင်း ရောင်ခြင်းအတွက် ဆေးများ
၁။ ပဌမတန်းစား ပဋိဇီဝဆေးများ
Amoxaccillin 45-60 mg/kg TDS x 10 days
Trimethoprim-Sulfamethoxazole 8-10 mg/kg x 10 days
Erythromycin/Sulfisoxazole 50 mg/kg x 10 days
၂။ ဒုတိယတန်းစား ပဋိဇီဝဆေးများ
Amoxacillin 80-100 mg/kg x 10 days
Amoxicillin-clavulanate 45 mg/kg x 10 days
Celpodoxime 10 mg.kg x 10 days
Cefuroxime 20 mg/kg x 10 days
Azithromycin 10 mg/kg x4days
Ceftriaxone 50 mg/kg x 1-3 doses
• Sore throat လည်ချောင်းနာ နဲ့ Tonsillitis အာသီးရောင်တာကို ဖြစ်စေတဲ့ ပိုး (ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ဗက်တီးရီးယား) တွေထဲက Group A beta-haemolytic Streptococci (GABHS) ဗက်တီးရီးယားဟာ Acute rheumatic fever ရက်တို ရူမက်တစ် အဖျားရောဂါ နဲ့ Kidney disease (Post-Streptococcal Glomerulonephritis) ကျောက်ကပ်ရောင်ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် Antibiotics ပေးရတယ်။ သုတေသနတချို့က ဒီလိုဆေးပေးတာ အကျိုး နည်းနည်းသာ ရှိတယ်တဲ့။ တာရှည်ပေးဘို့လိုသူကို Azithromycin ပေးနိုင်တယ်။ Tympanostomy tube ပြွန်ထည့်ဘို့လိုသူကို ထည့်ပေးရမယ်။
• Pharyngitis အာခေါင် ရောင်တာထဲမှာ Pharynx, Hypopharynx, Uvula, and Tonsils တွေလဲ ဆက်တွဲ နေနိုင်တယ်။ ပါးစပ် နောက်ပိုင်း နဲ့ လည်ချောင်း အပေါ်ပိုင်းရောင်တာ ဖြစ်တယ်။ Pharyngitis အာခေါင် ရောင်တာအတွက် NSAIDs and acetaminophen အနာသက်သာဆေး၊ Steroids (dexamethasone) စတီရွိုက်ဆေး၊ Viscous lidocaine ထုံဆေး နဲ့ Antibiotics တွေပေးရတယ်။
• Gonococcal Pharygitis ဂနိုးရီးယားပိုးကြောင့် အာခေါင်ရောင်ခြင်းကို ကုသရန်ဆေးများ
1. Ceftriaxone 125 mg IM < 45 kg; 250 mg IM > 45 kg
2. Spectinomycin (40 mg.kg IM x7days) and Erythromycin (40 mg/kg IM x7days) or Doxycycline (100 mg BD x7days)
• Non-Gonococcal Pharygitis ဂနိုးရီးယားပိုးကြောင့် မဟုတ်သော အာခေါင်ရောင်ခြင်းကို ကုသရန်ဆေးများ
1. Penicillin V (1 Gm BD x 10 days);
2. Amoxicillin (750 mg QID x 10 days; 60 mg/kg TDS x 10 days);
3. Benzathine PCN 1.2 million Unit IM);
4. Erythromycin 20-40 mg/kg TDS x 10 days);
5. Cephalexin 25-50 mg/kg BD x 10 days);
6. Ceffadroxil 30 mg/kg BD x 10 days);
7. Azithromycin 12 mg/kg QID x5days)
• Rhinitis ဆိုတာ နှာခေါင်း အဖုံးလွှာတွေ ရောင်တာ၊
• Rhinosinusitis or Sinusitis ဆိုတာ Nares and Paranasal sinuses (Frontal, Ethmoid, Maxillary, Sphenoid) နှာခေါင်းဘေး၊ နဖူး၊ ပါးရိုး၊ နာထင် စတဲ့နေရာတွေက ဆိုင်းနပ်စ်တွေ ရောင်တာတွေ ဖြစ်တယ်။
• Tonsillitis အာသီးရောင်၊ ပါးစပ်ဟခိုင်းရင် နီရဲ-ရောင်နေတဲ့ အာသီး တဖက်ဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမယ်။ မျိုရမဲ့လမ်းကို ကျဉ်းရာကနေ ပိတ်လုလုအထိ ကြီးနေနိုင်တယ်။ acute tonsillitis ရက်တို ရောင်ရာကနေ ပြည်တည်နိုင်တယ်။ Recurrent tonsillitis ခဏခဏဖြစ်နေသူဟာ allergy ဖြစ်နိုင်တယ်။ Acetaminophen/Paracetamol and/or Ibuprofen တွေကို နာတာ သက်သာအောင် ပေးမယ်။ Salt water gargle, Lozenges, Warm liquids ငုံဆေး၊ ပလုပ်ကျဉ်းတာတွေနဲ့ ရောင်တာ သက်သာစေမယ်။ Group A streptococus ကြောင့်ဖြစ်တာအတွက် Penicillin နဲ့ Amoxicillin တွေက ပဌမတန်းစား Antibiotics တွေ ဖြစ်တယ်။ ဆေး မတည့်သူကို Erythromycin ပေးနိုင်တယ်။ မသက်သာသူတွေကို Clindamycin or Amoxicillin-clavulanate ပေးနိုင်တယ်။ Virus ကြောင့်ဖြစ်တာ ကြာမယ်။ Chronic cases နာတာရှည်နေသူကို Tonsillectomy ခွဲစိတ်ရတယ်။
• Tracheitis လည်ပင်းမှာ အလည်တည့်တည့် အထက်-အောက် တန်းနေတဲ့ လေပြွန်ကြီး ရောင်တာ။
Sore throat လည်ချောင်းနာ နဲ့ Tonsillitis အာသီးရောင်တာကို ဖြစ်စေတဲ့ ပိုး (ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ဗက်တီးရီးယား) တွေထဲက Group A beta-haemolytic Streptococci (GABHS) ဗက်တီးရီးယားဟာ Acute rheumatic fever ရက်တို ရူမက်တစ် အဖျားရောဂါ နဲ့ Kidney disease (Post-Streptococcal Glomerulonephritis) ကျောက်ကပ်ရောင်ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် Antibiotics ပေးရတယ်။ သုတေသနတချို့က ဒီလိုဆေးပေးတာ အကျိုး နည်းနည်းသာ ရှိတယ်တဲ့။
• Common cold အအေးမိတာ
အဖြစ်များလွန်းတယ်။ အေးတဲ့အချိန်မှာ ပိုဖြစ်တယ်။ Flu တုပ်ကွေး နဲ့ Cold အအေးမိတာ အတော်ဆင်တယ်။ တွဲဖြစ်တာလဲရှိတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကနေ ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးပေါင်း ၂ဝဝ ကျော်တယ်။ Rhinoviruses ကနေ အများဆုံး ဖြစ်စေတယ်။ Antibiotics မလိုဘူး။ Warm drinks ပူတာ တခုခု သောက်ပါ၊ Lozenges ငံဆေးငုံပါ၊ Nasal sprays နှာခေါင်းထဲပန်းဆေးသုံးပါ။ Paracetamol သောက်ပါ။ကလေးတွေကို Aspirin မပေးပါနဲ့။ Over-the-counter ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ် ဝယ်လို့ရတဲ့ အအေးမိပျောက်ဆေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတိုင်းကို ကလေးငယ်တွေ မပေးပါနဲ့။
• Influenza (Flu) တုပ်ကွေး
အလွန်မတန် ကူးစက်လွယ်တယ်။ Influenza type A or B ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကနေဖြစ်တယ်။ C လဲ ရှိတယ်။
Good personal hygiene အနေအထိုင်တတ်ဘို့သာလိုတယ်။ ကမာမှာ Influenza pandemics ကပ်ရောဂါလိုဖြစ်တာ ၃ ခါရှိပြီ။ 1918, 1957, 1968 နှစ်တွေကဖြစ်ခဲ့တယ်။
• Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (ဆားစ်) ရောဂါ
ကူးစက်တဲ့ နူမိုးနီးယားတမျိုးဖြစ်တယ်။ ၂ဝဝ၂ တရုပ် နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှာ စတွေ့ခဲတယ်။
• Sinusitis (ဆိုင်နူဆိုက်တစ်စ်)
(ဆိုင်းနပ်စ်) လို့သာ ခေါ်တာများတယ်။ လူ့မျက်နှာ အရိုးထဲက လေခိုအိတ်လေးတွေကို ပိုးဝင်တာ ဖြစ်တယ်။ ကလေး-လူကြီးဖြစ်တယ်။ sinuses ဆိုင်းနပ်စ် တွေက နေရာ အမျိုးမျိုးမှာ ရှိတယ်။ Maxillary ပါးရိုး၊ Frontal နဖူးရိုး၊ Ethmoidal မျက်ခုံး-နားထင်ရိုး၊ Sphenoidal နားထင်ရိုး အအေးမိပြီးဆက်ဖြစ်တာ။ နှာခေါင်းကနေ ခပ်ဝါဝါ၊ ခပ်စိမ်းစိမ်း အရည်တွေ ကျနေမယ်။ မျက်နှာရိုးတွေ နာ-ကိုက်နေမယ်။ Pain relief နာတာသက်သာဆေး၊ Antibiotics ပဋိဇီဝဆေး နဲ့ Surgery လိုအပ်လာရင် ခွဲစိတ်ပေးရတယ်။ နှာခေါင်းနောက်နားက တက်စေ့တွေရောင်တာကို Adenoids ခေါ်တယ်။ Blocked nose နှာခေါင်းပိတ်နေမယ်၊ Snoring အိပ်ရင်ဟောက်မယ်၊ Sore throat လည်ချောင်းနာမယ်၊ ခပ်ဝါဝါ၊ ခပ်စိမ်းစိမ်း အရည်တွေ နှာခေါင်းက ကျမယ်။ ကလေးတွေမှာ ဖြစ်ရင် Middle ear infections နား အလည်ပိုင်း ရောင်တာ ဆက်ဖြစ်ပြီး Glue ear နားပိတ်နေမယ်။ Sinusitis လဲ ဆက်ဖြစ်တယ်။ Chronic rhinosinusitis ရက်ရှည် (ဆိုင်းနပ်စ်) ဖြစ်တာ Antibiotics ဘယ်ပိုးသေဆေးပေးမလဲ။ သြစတြေးလျ သုတေသနတခုအရ Roxithromycin က ပိုကောင်းတာ တွေ့ရတယ်။ ပိုးသေဆေးဟာ လူ ၁ဝဝ ဖြစ်တာမှာ တယောက် နှစ်ယောက်လောက် အတွက်သာ လိုတယ်။
• Decongestants ဆေး
နှာခေါင်းပိတ်နေတာကို သက်သာစေတယ်။ စားဆေး၊ ထည့်ဆေးရှိတယ်။ Steroid drops or sprays (စတီရွိုက်) အစက်ချ နဲ့ ပန်းဆေး၊ Mucus-clearing drugs (Mucolytics) အချွဲပျော်ဆေး၊ Antihistamines (အင်တီဟစ်စတမင်း) ဆေး နဲ့ Antibiotics (Penicillin, Amoxycillin) ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ ကုသတယ်။ Saline nasal spray နှာခေါင်းထဲ ဆားရည်ဖြန်းတာလဲ သက်သာစေတယ်။ Sinus puncture and lavage ခွဲစိတ်တာလဲ လုပ်ရတတ်တယ်။ Functional endoscopic sinus surgery (FESS) နည်းသုံးနိုင်တယ်။ Endoscopic modified Lothrop procedure (EMLP) နည်းလဲရှိတယ်။
• Croup (ခရော့ပ်)
Throat = Voice box (Larynx) လည်ချောင်း နဲ့ Windpipe (Trachea) လေပြွန်မကြီး ရောင်တာကို Croup (Viral laryngo-tracheo-bronchitis) လို့လဲ ခေါ်တယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် ကနေဖြစ်တယ်။ Hoarse voice အသံသြမယ်၊ Noisy breathing အသက်ရှူသံ ဆူညံနေမယ်၊ Harsh barking cough စူရှပြီး ဟောင်သလို ချောင်းဆိုးမယ်။ ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေမှာ ဖြစ်တာများတယ်။ အအေးမိရာကနေ ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်။ သူ့ဖါသူလဲ ပျောက်တယ်။ Glucocorticoids (စတီရွိုက်) ဆေးပေးနိုင်တယ်။ ရောင်နေတာတွေ လျှော့စေမယ်။ Nebulized epinephrine (Adrenaline) ဆေးကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။
• Diphtheria ဆုံဆို့နာ
Nose နှာခေါင်း Throat လည်ချောင်း နဲ့ Windpipe (Trachea) လေပြွန်မကြီးမှာ Corynebacterium diphtheriae ဗက်တီးရီးယား ဝင်တာ ဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေမှာ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်တယ်။ Runny nose နှာရည်ယိုမယ်၊ Severe sore throat လည်ချောင်းအတင်းနာမယ်၊ Fever ဖျားမယ်၊ Swollen lymph nodes လည်ချောင်းက တက်စေ့တွေရောင်မယ်၊ Furry grey or black coating လည်ချောင်းအထဲမှာ အဖြူရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင် အဖုံးလွှာလိုပေါ်လာမယ်။ အစာမြိုတာခက်မယ်၊ အသက်ရှူရ ခက်မယ်။ suffocation ဆို့နေသလိုဖြစ်လာမယ်။ Diphtheria vaccine ကာကွယ်ဆေးရှိတယ်။ DTP ဆိုတာ ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင် ရောဂါ ၃ မျိုးအတွက် ကာကွယ်ဆေးဖြစ်တယ်။ DTP-HBV-HIB ဆိုတာလဲ Diphtheria ဆုံဆို့၊ Tetanus မေးခိုင်၊ Pertussis ကြက်ညှာ၊ Hepatitis B အသဲရောင် ဘီ နဲ့ Haemophilus influenzae B တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးတွေ တွဲထားတာ ဖြစ်တယ်။ ၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေကို ထိုးပေးတယ်။
• Respiratory tract infections (1) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/respiratory-tract-infections-1.html
• Respiratory tract infections (2) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/respiratory-tract-infections-2-pleurisy.html
• Respiratory tract infections (3) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း (၃) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/respiratory-tract-infections-3.html
• Respiratory tract infections (4) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း (၄) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/respiratory-tract-infections-4.html
Posted by Dr. Tint Swe at 1:07 PM